3 IBM Fampiofanana ho an'ny tsirairay ao amin'ny orinasa tokony hampiasaina - ITS
IBM WebSphere dia manazava marika marika PC programming zavatra ao amin'ny kilasin'ny programa lehibe momba ny fandraharahana antsoina hoe "fampiharana sy famoronana middleware". Ireo vokatra ireo dia ampiasain'ny mpanjifa farany mba hanao fampiharana ary hampiditra ireo fampiharana amin'ny fampiharana samihafa. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny sasany amin'ireo taranja fanofanana IBM manan-danja indrindra. Nahoana izy ireo no zava-dehibe ao amin'ny Carreer anao? Inona no tanjon'ireny fianarana ireny ary raha toa ianao ka mendrika na tsy ho an'ireto dia.
3 Mpiofana momba ny IBM manan-danja indrindra dia voalaza etsy ambany:
Fametrahana sy fitantanana ny IBM WebSphere Portal 8 amin'ny Windows
Fametrahana sy fitantanana ny IBM WebSphere Portal 8 amin'ny Linux
IBM Sametime Administration 9.0
IBM Fianarana sy Fanamafisana ny:
1. Fametrahana sy fitantanana ny IBM WebSphere Portal 8 amin'ny Windows
2. Fametrahana sy fitantanana ny IBM WebSphere Portal 8 amin'ny Linux
3. IBM Sametime Administration 9.0
Ity fikarakarana IBM ity dia natao ho an'ireo mpitantana ny rafitra izay mila mahazo na manavao ny fahaiza-manaon'ny fikambanana WebSphere Portal. Amin'ny alalan'ny fampiasana an-tanana ny fampidirana, ny famolavolana ary ny fanaraha-maso ny WebSphere Portal, ireo lohandohan'ny rafitra dia hianatra fototra amin'ny alàlan'ny fanapahan-kevitry ny governemanta fandaminana webSphere Portal. Ao amin'ny antsasaky ny fianarana dia mamerina ny antontan-kevitra fototra momba ny fikambanana isan'andro ao amin'ny IBM WebSphere Portal Server 8.0 ianao. fametrahana portlet, fiarovana fandriam-pahalemana, ary tranonkala webSphere Portal. Ao amin'ny faharoa% 50, ny fihetsiketsehana miorina amin'ny fametrahana sy fametrahana ny WebSphere Portal V8.0.Configuration dia mampiditra ny angona ampiasain'ny WebSphere Portal, ny firaketana an-tsoratra rejisitra, ary ny vondrona amin'ny fahafaha-manao sy ny fampifanarahana amin'ny tsy fahombiazan'ny tsy fitokisana. Ity kilasy ity dia manokana ny singa vaovao manaraka miaraka amin'ny IBM WebSphere Portal 8.0:
Fandaharam-pamokarana vaovao, IBM Installation Manager
Tatitra fanadihadiana mikasika ny fanadihadiana
Overseen pages (Famoronana pejy noforonina avy amin'ny tranonkala Toolbar)
Loha-hevitra izay ampiasain'ny rafitra iray
Fanavaozana fanavaozana fanatsarana (ny metadata pejy dia natolotra ho tahadika ao amin'ny HTML)
OpenID bolster (mamela ireo vahiny hizaha ny fanamarinana amin'ny fampiasana mpamatsy olona vahiny)
Mpanamboatra fandaharana vaovao
Ity anatiny sy avy any afovoan-dalana ity dia mahasoa ho an'ireo mpitarika manana traikefa za-draharaha izay vaovao ao amin'ny IBM® WebSphere® Portal ary ireo mpiandraikitra rafitra WebSphere Portal (alohan'ny WS Portal 6.1) izay mila manatsara ny fahaiza-manaon'ny fikambanana WebSphere Portal. Amin'ny alalan'ity dingana ity, ny talen'ny rindrambaiko vaovao amin'ny WebSphere Portal Administration dia handray ny fitantanana ny orinasam-pandraharahana ilaina amin'ny IBM WebSphere Portal, ary amin'ny hevitra Portal. Ankoatra izany, ireo talen'ny tranonkala WebSphere Portal izay mila mamelona indray ny fahafahan'ireo orinasa WebSphere Portal dia hanangona haingana ny fandraisana anjara amin'ny fampidirana, famolavolana ary fanaraha-maso ny WebSphere Portal amin'ny tolotra isan'andro.
Understanding the situations of WebSphere Application Server and JVM
Mandraisa anjara amin'ny toe-javatra amin'ny WebSphere Application Server sy JVM
Tokony hanana fahafahana hampiasa ny fitaovana, ny kapila ary ny rafitra IBM WebSphere Portal 8.0 ianao mba:
Ampio peta-drindrina amin'ny takelaka fampiasana ilay vaovao hanatsofohana ilay pejy mpamorona pejy
Manapaha bokotra hafa
Mitantana ny fidirana
Manangana blôgy sy wiki
Amboary ny fametahana sy ny fanamarihana
Manaova ary ampiharo ireo fitsipika azo tsapain-tanana
Miaraka amin'ny asa fitadiavana
Redo na mariho ny fidirana
Manorena lohahevitra mahazatra
Amafisinao ny fiomanana hampiasa vaovao avy amin'ny tahiry Derby mankany amin'ny DB2 Universal Database
Ampidiro ny tranonkala WebSphere hampiasana ny server server IBM Tivoli Directory Server LDAP
Manaova tranokalan'ny fametrahana tamba-jotra misy biriky mitokana
Mifidiana topolojia tsara indrindra ho an'ny filan'ny fikambanana
Mivadika tsipika sy manaraka
Ampiasao ny Access XML mba hampivoarana ny fampiharana ara-pitsaboana
Mialà ary mamerina vaovao
Manaova hônasam-panafahana ho an'ny mpitsabo
Ity fikarakarana IBM ity dia natao ho an'ireo mpitantana ny rafitra izay mila mahazo na manavao ny fahaiza-manaon'ny fikambanana WebSphere Portal. Amin'ny alàlan'ny fampiasana an-tanana ny fampidirana, famolavolana sy fanaraha-maso ny WebSphere Portal, ireo lohan'ny rafitra dia hianatra ny maha-zava-dehibe amin'ny alàlan'ny fanapahan-kevitra mibaribary ao amin'ny fitantanana ny orinasa WebSphere Portal. Ny ampahany voalohany amin'ny fianarana dia manazava ireo orinasam-pandraharaham-panjakana mahazatra ao amin'ny IBM WebSphere Portal Server 8.0, ao anatin'izany fitantanana ny seranan-tsambo, fiarovana fandriam-pahalemana, ary tranonkala webSphere Portal. Ao amin'ny faharoa% 50 amin'ny fianarana, ny hetsika miorina amin'ny fametrahana sy fametrahana ny WebSphere Portal V8.0. Ny fandaharam-potoana dia mampiditra ny tahirin-tsolika ampiasain'ny WebSphere Portal, ny fitaterana ny client registry, ary ny fametrahana ny fahafaha-manao sy ny fampifanarahana amin'ny tsy fahombiazan'ny tsy fitokisana.
Ity fandehanana an-tserasera ity dia manampy amin'ny fanatanterahana ireo manampahaizana manam-pahaizana za-draharaha izay vaovao ao amin'ny IBM® WebSphere® Portal ary ao amin'ny rindrambaikon'ny WebSphere Portal (alohan'ny WS Portal 6.1) izay mila manatsara ny fahaiza-miasa amin'ny tranokalan'ny WebSphere Portal. Eto amin'ity laharana ity, ireo mpikambana vaovao ao amin'ny tranonkalan'ny WebSphere Portal Administration dia handray ny andraikitra manan-danja amin'ny fampiroboroboana ny IBM WebSphere Portal, ary ny hevitra momba ny tranonkala. Ankoatra izany, ny mpiandraikitra rafitra Web-Sphere Portal izay mila mamelona indray ny fahaiza-manaon'ny fikambanana WebSphere Portal dia haka haingana ny fandraisana anjara amin'ny fampidirana, fanaraha-maso ary fanaraha-maso ny WebSphere Portal amin'ny asa atao isan'andro.
Tokony hanana fahafahana hampiasa ireo fitaovana, fahaiza-manao ary teknika ao amin'ny IBM WebSphere Portal 8.0 amin'ny:
Ampio peta-drindrina amin'ny takelaka ampiasain'ny vaovao mpamorona pejy vaovao
Miaraha miasa amin'ny sendika
Tweak na marika ny fidirana
Ity Course Training Course ity dia mitarika anao amin'ny alàlan'ny famolavolana sy fitantanana IBM Sametime 9.0. Izy io koa dia mirakitra ny fanodikodinam-peo fototra.
Ity lalana ity dia manoro anao amin'ny fomba hanapahana sy hifehezana ny IBM Sametime 9.0. Ahitana fanadihadiana tena ilaina koa izy io.
Tsy ilaina ny fampahalalana momba ny fampiomanana amin'ny Sametime, kanefa tokony ho azonao tsara ny fitantanana ny rafitra sy ny fampiasana ny programa.
Ampahafantaro ny fizarana santionan'ny Sametime 9.0 (ankoatra ny faritra, horonan-tsarimihetsika lahatsary na fampidirana mpanjifa maro be)
Mankatoa ny fanorenana samihafa samihafa sametime 9.0
Atombohy, atsaharo ary atsangano indray ny tontolo manodidina sametime 9.0
Ampiasao ireo singa voamarik'i Sametime 9.0
Mahagaga ny mahita tanora IITians manana IIM an-tsaina: Sundar Pichai